DAAWO SAWIRRO: Qaraxii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay Ex-Kontrol Afgooye ee Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Qaraxii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay Ex-Kontrol Afgooye ee...
DAAWO SAWIRRO: Qaraxii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay Ex-Kontrol Afgooye ee Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa isa soo taraaya khasaaraha ka dhashay weerarkii argagixiso ee saaka ka dhacday Isgoyska Ex Control Afgooye ee Magaalada Muqdisho, laguna laayay dad aan waxba galabsan.
Nin la socday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa la sheegay inuu isku qarxiyay goob lagu canshuuro gaadiidka isaga kala goosha Magaalada Muqdisho iyo Gobolada Koonfurta.
Warar kale ayaa sheegaya in bartilmaameedku uu ahaa gaari nooca aanay rasaasta karin oo ay la socdeen laba Injineero oo dalka Turkiga u dhalatay, kana mid ah Injineerada dhiseysa wadada xiriirisa Magalaada Muqdisho iyo Degmada Afgooye.
Saraakiisha caafimaadka ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga soo xigtay in dhimashada ay gaari karto in ka badan afartan qof.
Ugu dambeyn, si lamid ah weerarkii Isgoyska Ex Zoobe ayaa waxaan jirin cid sheegatay masuuliyadda weerarkan, balse weerarada ceynkani oo kala ah ayaa waxaa aallaaba dusha u rita Ururka Al Shabaab.
naftiis halige is qarixayay
Qarax lagu dhammaaday oo ka dhacay Ex Control Afgooye ee Muqdisho